Somali, Tracts, GOOBTA 09 -- Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka qalbigi qalbigaaga oo dhan, naftaada oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan | Waters of Life
Home -- Somali -- Tracts -- Tract 09 (You shall love the LORD your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength)
GOOBTA 9 -- Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka qalbigi qalbigaaga oo dhan, naftaada oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan (Sharciga Kunoqoshadiisa 6:5, Matayos 22:37)
Dadku waxay daba socdaan noloshooda, oo waxay ku dadaalayaan inay miiska saaraan miisaankii dhididka (Bilowgii 3:19). Waxay soo saaraan oo raadiyaan farxad iyo nabad. Hase yeeshee, iyagu ma daneeyaan Ilaah; Ma aha qayb ka mid ah jadwal maalmeedka.
Dadka qaar ayaa ka baqaya Abuuraha Qaadirka ah. Waxay ka xumaadeen falalkooda xun, cabsida cadhada Kan Quduuska ah, oo ka cabsanaysa Maalinta Xukunka. Waxay ku tukadaan, u soomaan, sadaqo, raacaan Xajka oo u dagaallamaan aawadaa Eebe inuu ku qanco. Mana ayan aqoonsan in shuqulladoodu aysan ku filneyn inay ka soo baxaan cadaabta. Xataa jinniyadu waxay rumaysan yihiin midnimada Ilaah oo gariiraya (Yacquub 2:19).
Tiro yar oo ra'yi baadhayaal ah ayaa u muuqda sida gabbaldayaha, taasoo si tartiib tartiib ah u wareegaysa qorraxda ka soo baxda subaxii ilaa habeenkii, si ay u nuugto raajooyinkeeda oo u koraan si ay u bislaadaan oo ay u qaataan "midho" badan. Qof kasta oo u jeeda Eebihiis oo aan dib u dhicin, wuxuu nuugaa jacaylkiisa jacaylkiisa, oo wuxuu soo ururiyaa tamarta ruuxiga ah ee isaga, wuxuu yeelan doonaa miro weligeed ah.
Qofkee noocee ayaad tahay? Imisa daqiiqo maalintii miyaad u maleyneysaa in Eebihiin oo run ahaantii u adeegaan? Xusuusnow waxa loo qoray jacaylka ilaaha:
In kastoo aan carrabkaygu iyo xigmad lahaansho iskula hadlin, umana aan jeesanina, waayo, anigaa kiciyey taambuug ama sharaf; In kastoo aan hayo wax sii sheegidda, oo aan garanayo waxyaalaha qarsoon oo dhan iyo aqoonta oo dhan, iyo in kastoo aan leeyahay rumaysadka oo dhan, inaan buuraha wax ku cuno, laakiinse aanan jacayl lahayn, waxba ma ihi. (1 Korintos 13:1-2)
Amarka ugu muhiimsan ee Axdiga Hore waa inaad Rabbiga Ilaahiinna ah u jeclaato qalbigaaga oo dhan, naftaada oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan. Waa in aan isku tijaabinno: Miyaynu Ilaahay jecel nahay? Miyaynu isaga ka jeclaan lahayn qalbigayga oo dhan, iyo naftayada oo dhan, iyo xooggayaga oo dhan?
Kii qaynuunnadiisa iyo xukummadiisana waa la fududaystaa, oo wuu boobi doonaa, oo wuxuu arki doonaa inuu kan jacaylka ah Rabbiga jebiyo oo uu qalbigiisu qumman yahay. Isagu ma ihidin sanamyadeeda, xoog! Xaqnimadayda iyo naxariistaydu Rabbiga hortiisaan ku degganaan doonaan. Qalbigaygu kuma kalsoonaan karo oo keliya Ilaah, miyir-qabnimaduna maaha mid ka buuxsantay jacaylka Ilaah iyo gudaha gudaheeda oo aan toos aheyn tooska ah ee Abuuraha. Anigu waan jeclahay Kan Quduuska ah ee Quduuska ah laakiin ma jecla isaga oo dhan, maxaa yeelay, waxaan waqti badan, xoog iyo lacagba ku waayay waxyaalihii burburay ee dunidan. "
Ilaaha Qaadirka ahu wuxuu inaga sugayaa inaan towbad keenno oo qiranno ilmo iyo qiiro, anaga qudheenna, waxaan nahay runtii cibaadada aynu caabudno, waayo waxaan nafteena jecelnahay qalbiyadeenna oo dhan iyo xooggeena oo dhan. Annagu ma nihin Rabbigeenna si buuxda, kuwaas oo dhan barakooyinka yimaado. Tani waa dembigeena asalka ah.
Waxaan ubaahanahay cadhada Ilaah. Ciqaabkayagu waa inuu ahaado dhimasho iyo jahannamo, waayo, Rabbigu ma aha kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya nolosheenna. Haddii aynaan toobad keenin si daacad ah, hadda waan iska dhumin doonaa illaa iyo weligay.
Abuuruhu wuu ina fahmaa waana ogyahay inaan nahay dembiilayaal. In kastoo xitaa dhabta ah, ayuu ina jecel yahay, mana nihin, waayo wuxuu u soo diray Wiilka Maryan inuu na tusiyo jacaylka dhabta ah ee Ilaah iyo dadka. Masiixu wuxuu ku noolaa amarkii ugu muhiimsanaa ee buuxsamay iyo jacaylka. Waxa uu ku tukaday oo baray dadka taabacsan Salaadda Eebbe:
Aabbahayaga jannada ku jirow, magacaagu quduus ha ahaado. Boqortooyadaadu way imanaysaa. Oo doonistana waxaad ku samayn doontaa dhulka meelaha ugu hooseeya. Maanta nolol maalmeedkaaga na sii. Oo naga cafi dembiyadayada, sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan. Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du. Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa. Aamiin. (Matayos 6:9-13)
Masiixu ma ixtiraamo, laakiin wuxuu ammaanay Aabihiis Rabigiisa oo jannada ku jira oo qirtay, "Cuntadaydu waa inaan sameeyo doonista kii i soo diray oo dhammaysto shaqadiisa" (Yooxanaa 4:34).
Marka sidaas la samaynayo, Masiixu wuxuu markhaati u yahay jacaylkiisa runta ah oo jacayl u leh Ilaah. Wiilka Maryan ma ahayn Suufi ama asal ah, waayo jacaylka Ilaah ayaa la ogaaday oo wuxuu wax ku ooliyay jacaylkiisa dhammaan dadka. Waxa uu booqday magaalooyinka iyo magaalooyinka lugta, isaga oo sheegay in aabaha Ilaah u yahay qof walba, uu u bogsiiyey kuwa buka, uuna u dhiibay jinni ay ka heleen jinni maskaxeed, oo sara kiciyey kuwii dhintay, oo wuxuu qaatay dembiga dunida oo dhan, oo wuxuu u geeyey quruumaha oo dhan, Ilaah. Masiixa wuxuu inaga nadiifiyaa dembiga oo dhan isaga oo kafaaraggudkiisa gaarka ah. Wuxuu xukunka Ilaahay u soo qaatay sida naloogu beddelayo, sidaas darteed qofkii rumeeyaa oo naftiisa u shaqeeya wuxuu helayaa nolol waarta. Jacaylka Ilaah wuxuu ku dhex jiraa Masiixa. Waxa uu doonayaa inuu inaga beddelo naxariistiisa inaynu u naxariisto sida naxariista Eebbe.
Isagoo kuwa xaqiiqada ka xishoodaya dembiyadooda, Masiixa wuxuu Ruuxiisa Quduuska ah u dirayaa kuwa ku tukado oo suga awooda nimcadiisa. Ruuxan wanaagsani waa jacaylka Ilaah laftiisa, sida Rasuul Bawlos uu ku qoray, "jacaylka Ilaah ayaa lagu shubay qalbigayaga by Ruuxa Quduuska ah oo la ina siiyey." (Rooma 5:5).
Ruuxu waxa uu ina siinayaa hanuun iyo iftiin ilaah ah si aan Ilaah ugu jeclaano qalbiyadeena oo dhan, nafta oo dhan iyo xooggayaga oo dhan, oo aynu ugu adeegno farxad iyo farxad. Ruuxu waxa uu nagu hanuuniyaa inaan ku noolaano sida Masiixa oo u noolaa oo u barya kuwa kale. Ilaahay nama amro inaan raacno amarrada aan la aqbali karin; Wuxuu ina siinayaa hanuun iyo awood uu ku noolaado nolol raalli ka ah.
xusuuso dhammaan aayadaha la daabacay, maxaa yeelay waxay ka imanayaan Kitaabka Quduuska ah. Waxaad ka heli kartaa awoodda aad ku jeclaan karto Ilaah oo dhan wadnahaaga iyo maskaxdaada. U soo duceeya Ilaah inuu Ruuxa jacaylkiisa ku shubo qalbigaaga.
Ma jeclaan lahayd in aad wax badan ka akhriso amarrada iyo ballan qaadyada Ilaah?
Waxaan u diyaarsanahay, markaan codsanno, inaan kuu soo dirno Injiilka Masiixa oo leh mediyo iyo duco. Waxaad ka heli doontaa in ka badan shan boqol oo amar amar ah iyo, haddii aad rabto gargaar Ruuxa Ilaah, wuxuu idin siin doonaa awood ruuxi ah si ay u dhawraan.
Ku dhiirigeli saaxiibbadaa inay jeclaadaan Ilaah iyo raggaba.
U sheeg war wanaagsan oo ku saabsan jacaylka Ilaah ee deriskaaga iyo asxaabtaada adigoo siinaya buug-yarahaan. Waan ku faraxsannahay inaan kuu soo dirno nuqullo kooban oo xor ah, si xor ah, haddii aad noo sheegtid inta aad si dhab ah u qaybin karto.
Page last modified on September 19, 2018, at 09:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)